I-2 JUNIPER Izifundo Zokuqeqesha Wonke Umuntu Embonini Ufuna Ukufunda | ITS
I-2 JUNIPER Izifundo Zokuqeqesha Wonke Umuntu Embonini Ufuna Ukufunda
I-Juniper yenza ukuthuthukiswa okuqhutshwa phambili okunikeza ukuhlanganisa ikhono lokusebenzisana, ukunakekelwa kwezinkinga, nokubamba ukuvula.
I-Juniper nayo ihlanganisa abantu ukuhlanganisa imicabango yabo endaweni yabo jikelele kanye nokuphefumula impilo emibonweni yabo. Uhlelo luyisimo lapho abantu abasha nabahlangana nabo behlangana khona, futhi yimiphi imiphumela engase imangele ngempela.
JUNIPER Ukuqeqeshwa Courses Wonke Umuntu In Industry Ukufuna Ukufunda
I-JUNIPER Training Courses & Certification ingokulandela
I-1. JUNIPER JNCIS -SEC
Inhloso JUNIPER JNCIS -SEC
Iqembu elihlosiwe likaJUNIPER JNCIS -SEC
Okubalulekile ku-JUNIPER JNCIS -SEC
I-2. JUNIPER JNCIA - UJUNOS
Inhloso JUNIPER JNCIA - JUNOS
Iqembu elihlosiwe lika-JUNIPER JNCIA - JUNOS
Okubalulekile ku-JUNIPER JNCIA - JUNOS
Njengenhlangano, umgomo oyinhloko kaJuniper ukuhlanganisa yonke into nokubandakanya wonke umuntu. Njengobhizinisi, uJuniper uzama izinhlangano ezibalulekile ezibaluleke kakhulu ezenza umsebenzi wazo, zivuselele futhi zixhumane neqembu eliphawulekayo ngezindlela ezinomthelela wangempela ekuphileni kwabantu.
JUNIPER JNCIA - UJUNOS
I-JNCIS-SEC noma iJuniper Networks Certified Specialist - Isifundo sokuphepha sihlose ukunikeza amakhono omhlaba ezinkambisweni zokuphepha, ukuhlela nokuphenya ezimweni ezinkulu zebhizinisi. Leli hlelo lihlelwe ochwepheshe bezokuphatha izinhlelo abanokuhlangenwe nakho kanye nokufunda emgwaqeni wezinhlelo zeJunos zezinjajethi ze-SRX Series.
Bonisa ukuqondisa nokuphepha okuvamile kanye namaphethini amanje ekusebenziseni i-intanethi.
Nikeza umdwebo wezigaxa ze-SRX Series kanye nokuhlelwa kohlelo.
Shintsha umjikelezo oqhubekayo wesikhala kanye nokudala kwesikhashana okwenziwe ngamagajethi we-SRX Series.
Thatha, uhlele, kanye nezikrini.
Thatha, uhlela, namasu wokuphepha kwesikrini.
Thatha, uhlele, futhi ukuqinisekiswa kwamaklayenti e-firewall.
Thatha izinhlobo ezahlukene zokuhlelwa kwesistimu.
Izindlela zokwakha kanye nezikrini ukuhlela ukuhlela ukuhlaselwa.
Chaza, yenza, ne-NAT yeskrini, njengamanje ngezigaba zokuphepha ze-Junos.
Chaza isizathu nemishini ye-IP Security (IPsec) izinhlelo zangasese zangasese (VPNs).
Yenza i-IPsec VPNs esekelwe futhi isekelwe ohlelweni olusekelwe kanye nolwesikrini.
Sebenzisa futhi uthuthukise imininingwane yesignesha ye-IDP.
Hlela indlela ye-IDP yeskrini namafomethi esu.
I-Portray, ukuhlela, nokubukeka ukufinyeleleka okuphezulu kwezingubo zangaphansi.
I-innovative Technology Solutions inikeza ukuqeqeshwa kwe-JNCIS ezindaweni ezihlukene ze-9 e-India - Bangalore, eChina, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida nasePune.
Leli klasi lizuzisa abalawuli bezinjajethi ze-SRX Series. Labaphathi bahlanganisa abanikazi bezinhlelo, abaphathi, abasebenzi be-bolster, kanye ne-faculty ebambisene nabo.
Ukucindezelwa kufanele kube nolwazi olubalulekile lokuphatha izinhlelo kanye nokuqonda ukuboniswa kwe-Open Systems Interconnection (OSI) kanye nesilandela somhlangano we-TCP / IP. Ukucindezela kufanele kufinyelele nakanjani ku-Courses to the Junos Operating System (IJOS) course & Junios Routing Essentials (JRE), noma ube nesipiliyoni esilandelayo ngaphambi kokuya kuleli klasi.
Ukuqeqeshwa kweJNCIA - Junos kusuka ku-Innovative Technology Solution kuyisitifiketi sezinga lesigaba esenza njengenhlangano yokusungula izifundo zeJunios. Ama-Juniper Networks CertifiedAssociate ubonisa amandla ochwepheshe wokusebenza noJunos OS, ukushintshanisa, ukuqondisa kanye nokubaluleka kokusekela izinhlelo eziyisisekelo. Thola ithuba lokuthola mayelana nezingxenye eziyinhloko zezinhlelo ze-Junos ngokusebenzisa iziboniso ezibonakalayo nezesabha. Khetha ukufaneleka kokucushwa nokuphathwa kweJunos OS kanye nokusebenza kwegajethi.
Yenza imisebenzi ehlukene ekucwangcisweni kwe-CLI nezindlela zokusebenza
Ukuphinda uphinde ufake amajejethi we-Junos kuzilungiselelo zawo zokukhiqiza ezizenzakalelayo
Yethula futhi uqondise ukuhlelwa kwe-interfaces
Yenza izabelo zokungena kwe-framework, ukumisa ubuqiniso, i-SNMP ne-NTP
Qalisa kabusha ukuhlela amasevisi
Hlela futhi usebenze i-uni-cast RPF (Ukubuyela emuva kwePath Road)
Ukuvuselela ukuvuselelwa kabusha kwe-watchword nokurekhoda ukusekelwa kohlaka lwamagajethi kaJunos
Ukuqeda i-Junos OS ngokuphumelelayo
Ukuqapha ukuqondisa imisebenzi, ukuqondisa okuqinile, i-OSPF kanye namasu okuqondisa
Hlela amashaneli e-firewall
I-Solutions Inventive Technology Solutions inikeza ukuqeqeshwa kweJNCIA ezindaweni eziyingqayizivele ze-9 e-India - Bangalore, eChina, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida nasePune.
Le nkambo ye-Junos iphelele kuma-youngglings noma izinhlelo zokuphatha izinhlelo ezifisa ukukhulisa ukuqonda kwabo kuJunos OS, i-Juniper Networks kanye nokuqondisa imibono.
Kuzo zonke ezintathu ze-Junos Tracks ngaphansi, i-JNCIA-Junos yiziqu ezibalulekile I-Tracks Junosos:
Inhlangano yezobuchwepheshe Ukuhamba nokushintsha: Lo mzila wukuthi labo abasebenza ngesisekelo noma bafike kumalungiselelo ku-Juniper Networks abaqondisa kanye nokushintsha imvelo yokuphela kokugcina ngaphakathi kwenkambu yokuxhumana yabezindaba noma imvelo ye-Fortune 100 Enterprise.
Ukuqhuba ukuhamba nokushintsha: Lo mzila wilabo abasebenza kancane kancane ngezimo ze-Enterprise ezithuthukisayo ezethula futhi zakha ama-Juniper Networks emisha amasistimu asekelwe emisha lapho i-LAN ne-WAN ishintsha bese ishintsha khona ukuhlala.
Ukuphepha kweJunos: Lo mzila uhlotshaniswa nabantu abakubekayo futhi baqhubekele izinhlelo ezivikelekile ze-Juniper Networks.